‘भोज खाँदा मापसे चेक हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ’
निर्जना लामिछाने, ट्राफिक प्रहरी महानगरीय ट्राफिक प्रहरी परिसर, भक्तपुर
ट्राफिक प्रहरी भएर काम गर्न थालेको कति भयो ?
२०५६ सालदेखि काम गर्न थालेकी हुँ। २० वर्षजति भयो।
पढाइ कहाँसम्म पुर्‍याउनुभयो ?
त्यसपछि किन पढ्नुभएन ?
एसएलसी सक्नेबित्तिकै प्रहरीमा जागिर खाइयो। जागिर गर्न थालेपछि पढाइ त्यसै रोकियो।
ट्राफिक क्षेत्रमा कसरी आइयो ?
ट्राफिक प्रहरीको काम र ड्रेस खूब मन पथ्र्यो। रहरले यो पेशातिर डोर्‍यायो।
२० वर्षअघि तपाईंले फोर्समा काम गर्छु भन्दा परिवारको प्रतिक्रिया कस्तो थियो ?
परिवारबाट कुनै रोकटोक भएन। सबैको साथ पाएँ।
बिहेपछि काम गर्न अप्ठ्यारो भयो कि ?
विवाहपछि पनि काम गर्न त्यति गाह्रो भएन। श्रीमान्को तर्फबाट पनि उत्तिकै साथ पाएँ।
महिला ट्राफिक प्रहरीले केकस्ता समस्या भोग्नुपर्छ ?
कामले महिला र पुरुष भन्दैन। काम गर्दा महिला र पुरुष ट्राफिक प्रहरीले उस्तै–उस्तै चुनौती सामना गर्नुपर्छ।
कस्ता चुनौती सामना गर्नुपर्छ ?
सडकमा काम गर्ने भएकाले गाडी, चालक, सहचालक, पैदलयात्री यिनैसँग अल्झिनुपर्छ। ट्राफिक नियम पालना नगर्ने, चालकले जता पायो त्यतै गाडी रोक्ने, यात्रु ओराल्ने–चढाउने गर्छन्। यही नै हुन् हाम्रा चुनौती।
चालकले महिला ट्राफिक प्रहरीलाई कस्तो व्यवहार गर्छन् ?
कसैले हेप्छन्, कसैले राम्रो व्यवहार गर्छन्। कोही नबुझ्ने खालका पनि हुन्छन्।
कस्तो तरिकाले हेप्छन् ?
भनेको मानिदिँदैनन्। गाडी साइड लगाउनुस् भन्दा हुत्याएर लान्छन्। चेकिङमा लाइसेन्स, बिल बुक देखाउनुस् भन्दा आलटाल गर्छन्।
यस्तो हुँदा जागिर छोडिदिऊँजस्तो लाग्दैन ?
लाग्दैन। सडकमा हुने यस्ता विभिन्न समस्याका लागि त ट्राफिक प्रहरीलाई तैनाथ गरिएको हो। हामीले पनि त्यस्तो सोच्न थाल्यो भने कसले गर्छ काम ? सडक कसरी व्यवस्थित हुन्छ ? तर, कहिलेकाहीँ आवश्यक परेको बेला बिदा नमिल्दा चाहिँ अलि नरमाइलो लाग्छ।
भक्तपुर, धुलिखेल, थापाथली, कोटेश्वर, शहीदगेट, वीर अस्पतालतिर ड्युटी गरियो।
भक्तपुर र काठमाडौँमा काम गर्दा के फरक पाउनुभयो ? काम गर्न कहाँ बढी गाह्रो रहेछ ?
काम गर्न त काठमाडौँमा सजिलो लाग्यो। उता कारबाही गर्न सजिलो, यता त निकै गाह्रो छ। फेरि भक्तपुरमा मापसेको कुरै नगरौँ। केही भने भोज गएर आ’को भनेर पन्छिन खोज्छन्। भोज खाँदा मापसे चेक हुन्छ भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ।
त्यस्तो बेला कारबाही गरिन्छ कि नाइँ ?
ट्राफिक नियम उल्लघंन गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही हुन्छ।
ड्युटीमा गाह्रो–अप्ठ्यारो केही छ कि ?
अरू त त्यस्तै हो तर शौचालयका कारण अलि समस्या हुन्छ। कुनै–कुनै ठाउँमा सडकनजिक शौचालय हुँदैन। ड्युटी छोडेर टाढासम्म जान मिल्दैन। कोही–कोही मानिस पनि त्यस्तै हुन्छन्। एकदुई पटक जाँदा नै ताल्चा लगाइदिन्छन्।
ट्राफिक प्रहरीलाई केकस्तो स्वास्थ्य समस्याले सताउँछ ?
दिनभरि उभिइरहँदा खुट्टा दुख्ने, धुवाँधुलोका कारण चिलाउने, एलर्जी, रुघाखोकी लाग्ने हुन्छ।
काम गर्दा कस्तो लाग्छ ?
ट्राफिकको ड्रेस लगाएर काम गर्नु जत्तिको खुशी अरू केही कामबाट पाइँदैन। जनताको सेवा गर्न पाउँदा एकदमै खुशी छु।